निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था : कम्पनी विश्लेषण (आइतवार, १० चैत २०७५) | गृहपृष्ठ
Home लगानी कम्पनी विश्लेषण निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था : कम्पनी विश्लेषण (आइतवार, १० चैत २०७५)
on: १० चैत्र २०७५, आईतवार ०९:४६ कम्पनी विश्लेषण, लगानी
निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था २०५५ साल कात्तिक १२ मा स्थापना भएको हो । कम्पनीले देशका सम्पूर्ण ७७ जिल्लामा १ सय ८१ शाखा कार्यालयमार्फत लघुवित्त सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । नयाँ क्षेत्रमा कार्यक्रम विस्तार गर्दा लघुवित्त सेवाको पहुँच नपुगेका गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई कम्पनीले प्राथमिकतामा राखेको छ । पुस मसान्तसम्ममा कम्पनीले कुल ३ लाख ३८ हजार २ सय विपन्न परिवारमा लघुवित्त सेवा प्रदान गरेको छ । कम्पनीले प्रदान गर्ने सेवाहरु लघु कर्जा, लघु बचत, लघु बीमा र विप्रेषण सेवा रहेका छन् । २०७४/७५ को मुनाफाबाट शेयरधनीलाई २० प्रतिशत बोनस शेयर र २२ दशमलव ११ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको छ । शेयरधनीको हिग्राही खातामा बोनस शेयर र बैंक खातामा नगद लाभांश पठाइसकेको छ । चालू आवको दोस्रो त्रैमासमा कम्पनीले रू. ३३ करोड ३२ लाख नाफा कमाएको छ । यो नाफा गत आवको सोही २३ प्रतिशत वृद्धि भएको हो । सञ्चालन नाफा र खुद ब्याज आम्दानीमा वृद्धि भएकाले नाफा बढेको हो । चुक्तापूँजी रू. १ अर्ब २० करोड छ भने रिजर्भ कोषमा रू. १ अर्ब १४ करोड छुट्याएको छ ।
कम्पनीको चालू आवको दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र २०७४/७५ बीच तुलना गर्दा :
दोस्रो त्रैमाससम्ममा कम्पनीले रू. ९ अर्ब ६८ करोड निक्षेप संकलन गरेको छ भने रू. १७ अर्ब कर्जा प्रवाह भएको छ । गत आवको सोही अवधिको तुलनामा निक्षेप ३२ प्रतिशत र कर्जा प्रवाह २६ प्रतिशत वृद्धि भएको हो । कम्पनीको लगानी रू. ६५ करोड ९१ लाख रहेको छ ।
कम्पनीले रू. ७६ करोड ९२ लाख खुद ब्याज आम्दानी गरेको छ भने सञ्चालन नाफा रू. ५१ करोड ७६ लाख रहेको छ । कर्मचारी खर्च १२ प्रतिशत बढेर रू. ३२ करोड १ लाख र अन्य सञ्चालन खर्च रू. ५ करोड ६१ लाख रहेको छ ।
सम्भावित जोखिम बापतको व्यवस्थामा कम्पनीले रू.६ करोड ३२ लाख छुट्याएको छ । निष्क्रिय कर्जा १ दशमलव शून्य ९ प्रतिशत र पूँजीकोष लागत ८ दशमलव ७५ प्रतिशत रहेको छ । स्थिर सम्पत्ति ७ प्रतिशत घटेर रू. १७ करोड ७७ लाखमा सीमित भएको छ भने अन्य सम्पत्ति २९ प्रतिशत वृद्धि भएर रू. १ अर्ब ११ करोड पुगेको छ ।
कम्पनीले सार्वजनिक गरेको दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार प्रतिशेयर आम्दानी रू. ५५ दशमलव ५४, मूल्य आम्दानी अनुपात १३ दशमलव ७७, तरलता अनुपात १५ दशमलव ३० प्रतिशत, कुल र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १ सय ९५ दशमलव ७७ रहेको छ । बिहीवारको शेयरमूल्य रू. ७ सय २० कायम भएको छ ।
अर्निङ पावर रेशियो : ०.०१ गुणा
अर्निङ यिल्ड रेशियो : ७.७१ प्रतिशत
कम्पनीको ५९ दिनको कारोबार अवधिको अन्तिम ३ दिनमा आइडेन्टिकल थ्री क्रश बियरिश आकृति बनेको छ । यस्तो आकृतिले कम्पनीको शेयरमूल्य बियरिश ट्रेन्डमा रिभर्स हुने संकेत गर्दछ । विश्वसनीयता भने उच्च रहेको छ । आरएसआई न्यूट्रल जोन ४५ दशमलव १४ स्केलमा छ । यसले शेयर खरीदविक्री चाप सन्तुलनमा रहेको देखाउँछ । त्यस्तै स्ट्यान्डर्ड डेभिएशन १० दशमलव ९८ बिन्दुमा छ । उताब चढाव न्यून रहेको छ । यस्तो अवस्थामा कम जोखिम हुन्छ भने प्रतिफल पनि कम हुने गर्दछ । मुभिङ एभरेजमा २६ औसत मूल्यरेखा र १४ दिने औसत मूल्यरेखा एकआपसमा टाढिएका छन् । हालको मूल्य यी दुई रेखाभन्दा तल रहेको छ । बिहीवारको शेयरमूल्य रू. ७ सय २० देखि बजारको अवस्था परिवर्तन भई महँगिएमा रू. ७ सय ४४ मा प्रतिरोध पाउने र सस्तिएमा रू. ६ सय ९३ मा टेवा पाउने देखिन्छ ।
बैंक अफ काठमाण्डू : कम्पनी विश्लेषण (शुक्रवार, ६ वैशाख २०७६)
६ बैशाख २०७६, शुक्रबार ०९:०९
तारागाउँ रिजेन्सी होटल : कम्पनी विश्लेषण (मङ्गलवार, २६ चैत २०७५)
२६ चैत्र २०७५, मंगलवार ०९:०७
सोल्टी होटल : कम्पनी विश्लेषण (मङ्गलवार, २६ चैत २०७५)
२६ चैत्र २०७५, मंगलवार ०९:०६
नबिल बैंक लिमिटेड : कम्पनी विश्लेषण (शुक्रवार, १७ फागुन २०७५)
१७ फाल्गुन २०७५, शुक्रबार ०७:४९
इमेल : i[email protected]